DF oo cambaareeysay falka wuxuushnimada leh ee argagixisadu ay ku gumaaday Shacabka Soomaaliyeed – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Daahir Aadan / May 31, 2020 May 31, 2020
Muqdiisho.(SONNA):- Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa cambaareysay falka wuxuushnimada leh ee argagixisad ay ku gumaaday Shacabka Soomaaliyeed.
Dowladda waxay tacsi tiiraanyo leh u direysaa qoysaska iyo qaraabada ay ka geeriyoodeen dadkii ku shahiiday weerarka bahalnimada ah ee kooxaha naf lacaariga ah ee ay ku qaadeen gaariga dadweynaha ee marayay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye,dhammaan dadkaas shuhadada ah waxaan u rajeyneynaa inuu Alle siiyo naxariisto janno inta dhaawac ah Alle u boogo dhayo.
Falkan arxan darada ah wuxuu cadeyn u yahay sida kooxaha calooshood u shaqeysatayaasha ah ee ka macaasha daadinta dhiiga shacabka Soomaaliyeed ay markasta ugu hamuun qabaan baabi'inta dadka si aan kala sooc lahayn.
Dowladda Soomaaliyeed oo kaashaneysa shacabka Soomaaliyeed waxay ku rajo weyn tahay in guul laga gaaro dagaalka lagu soo afjarayo kooxaha argagaxisada, Diin laawayaasha ah ee danta ka dhex arkay bur burinta dadka iyo baabi'inta ummadda.
Soomaaliya oo Shixnad kaalmo Agab Caafimaad ah ka heshay Midowga Yurub+Sawirro
Ra’iisulwasaaraha XFS oo Dalka dib ugu soo laabtay ka Dib Safar Shaqo uu ku tagay Qatar+Sawirro
RW ku-xigeenka Dalka oo daah-furay mashruuc dib ucasriyeynta Qalabka Maamulka Hawada Soomaaliya+Sawirro
Soomaaliya oo yeelatay xarunta Qaran ee ka digista halis wadareedka+Sawirro